Iindlela ezi-5 zicocekileyo zeSemalt Izixhobo ze-SEO kunye noHlaziyo lweWebhu Phuculo kwiiWebhusayithi zakho
Ngaba ungumnini wamashishini amancinci, Ivenkile ye-Intanethi, isiqalo, i-freelancer, okanye umbhali obezama ukuba iwebhusayithi yabo ibekwe elona xesha lide kwaye ungakhange ube nethamsanqa ukuza kuthi ga ngoku?
Ngaba sele ufumana umhlaba we-SEO uthotho lwezinto ezingalunganga, oko kungenangqondo kwaye kudla ixesha elininzi kunye nomzamo wakho?
Ukufumana indawo yakho yewebhusayithi yenye yezona zinto zibalulekileyo zokuqhuba ishishini kwi-Intanethi, kunye nokuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ivela kwiphepha lokuqala likaGoogle kufuneka ibe yenye yezinto eziphambili ngokubaluleka.
Ngokophononongo, iipesenti ezingama-95 zokugcwala kwi-intanethi zangena kwiwebhusayithi ezivela kwiphepha lokuqala leGoogle, kwaye yi-5% kuphela efunyenwe ngamaphepha alandelayo.
Ngoku, ngaphambi kokuba ucinge ukuba lo mdlalo uphelile, ukufumana indawo yakho kubekwe kuyo yonke indawo akukho nzima. Kufuneka nje umonde kunye nokuzinikezela kwexesha elide. Kwi-Semalt, siyaqonda ukuba i-chunk enkulu yexesha lakho ichithwe ukuqhuba ishishini lakho kunye nokulawula wonke umthwalo wokuhamba oza nayo.
Kungenxa yoko le nto siye salungelelanisa izixhobo zethu ze-SEO kunye neenkonzo zeWebhu zohlalutyo ukuze zinganeli ukukunceda nje ube phezulu kuGoogle, kodwa zikwabonelela ngokufumana idatha ebalulekileyo kunye nezibalo ngabantu abatyelele iwebhusayithi yakho. Ethubeni, olu lwazi lunokuba nefuthe kwizigqibo zakho zeshishini, likuvumela ukuba ukhombe indlela abathengi abaziphatha ngayo ngokufumana iimfuno zabo ngokuchanekileyo kwaye ekugqibeleni uvale izivumelwano ezininzi.
Abantu abasemva kweSemalt basebenze ngokungakhathali kwaye banomdla wokuphuhlisa ezi zixhobo ze-SEO ukusuka kwiminyaka yamava obuqu. Makhe sihlolisise indlela izixhobo ze-Semalt ze-SEO kunye neempawu zeWebhu zohlalutyo ezinokukunceda ngayo kunye neshishini lakho lichume.
Iindlela ezi-5 zeSemalt Izixhobo ze-SEO kunye noHlaziyo lwewebhu ukuPhucula iZikhundla zakho zeWebhusayithi
1. UkuBoniswa kweWebhusayithi:
I-Semalt ibonelela ngeenkonzo ezigqibeleleyo zewebhusayithi ezinceda iwebhusayithi yakho ukuba ibeke phezulu, ngokungasebenziyo, nangokulula kwiinjini zokukhangela ezinjengeGoogle . Indawo yewebhusayithi eyenziwe kakuhle ngokuchaseneyo neemetwork ezinjengezithuthi ezisindayo, inani lexesha elichithwe kwisiza, kunye nezinga eliphantsi, nto leyo ethetha inani labantu abatyelela indawo yakho kwaye bemke kwangoko. Iqela lethu leengcali ze-SEO lizisa kwiimfuno zakho zewebhusayithi ngokwenza i-SEO kunye nesicwangciso sokusebenza sewebhu esitsala abathengi abaninzi kwaye sincede ukuqhubela phambili ishishini lakho.
Ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ilayisha ngokukhawuleza yenye yezinto ezibalulekileyo zokusetyenziswa kwewebhu. Ukuba ithatha indawo yakho ithatha ngaphezulu kwemizuzwana emi-3 ukulayisha, kukho ithuba elikhulu kakhulu labasebenzisi ukuba bakhungatheke kwaye bemke.
Oku kunciphisa ngokuthe ngqo ukugcwala kwabantu abangenayo kunye nenani lokubuya, oko kuchaphazela indlela ebekwa ngayo iwebhusayithi yakho. Izixhobo ze-Semalt ze-SEO ziyaqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho yenziwe kakuhle ukuba ihlangabezane nazo zonke iithagethi ezicetyiswayo kwaye iphendula ngokwaneleyo ekusebenzeni ngaphandle komthungo kuzo zombini iidesktops kunye neefowuni / neetafile kuba ngaphezulu kwe-50% yeendlela zentengiso ezikwi-intanethi zifunyenwe zenziwa ngee-smartphones zodwa.
Ukusebenziseka kwewebhu okusebenzayo kuthetha ukuba iindwendwe zakho ziya kuba namava omsebenzisi olungileyo xa zityelele iwebhusayithi yakho, zibenze ukuba babe nako ukubuya kwaye balijonge rhoqo kwixesha elizayo.
2. Uphando lwamagama aphambili
S Iinkonzo ze-emalt ze-AutoSeo kubandakanya nzulu ubunzulu bophando lwegama eliphambili kwi-niche yakho, ukusebenza kwiphepha, ukulungelelanisa ukwakha, kunye neengxelo zohlalutyo olupheleleyo lwewebhu zonke ziyilelwe ngenjongo enye engqondweni: ukunceda iwebhusayithi yakho ukuba inyukele phezulu kweSERPS yeGoogle.
Kodwa ukuze ubekwe kwinqanaba, izithuthi zakho ezinokubakho zifuna umkhombandlela kunye neempawu ezibonakalayo zobukho bendawo yakho ukuze ufikelele kuwe. Ubeka njani le miqondiso ukuze bayifumane?
Ewe, ngophando oluphambili! Kuyinyani akukho-brainer. Ngenxa yokuba masinyaniseke, sinabemi abangaphezulu kweebhiliyoni ezintathu zabasebenzisi be-intanethi, iwebhusayithi yakho injengeentlanzi ezincinci kulwandle olukhulu. I-Semalt inokukunceda ukutshintsha oko.
Uphando lwegama elingusisiseko sisiseko se-SEO elungileyo, kwaye ukwazi ngqo ukuba yeyiphi na amagama aphambili oza kuyifaka kumxholo oyithumela kwi-Intanethi ayizukuchaza kuphela isikhundla sakho, kodwa ukugcwala kwakho, ukungena kwewebhu, kunye nokunye okuninzi.
Nokuba uthengisa imveliso entsha, inkonzo okanye ngokwakho, ukudala umxholo kuyimfuneko, kwaye ukufumana amagama aphambili alungele loo meko ikuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ifikelela kubantu abangakumbi.
Nokuba ufuna ukusebenzisa amagama aphambili amafutshane okanye amagama abalulekileyo, okanye ufuna nje ukwazi ukuba leliphi inani lamaxesha afanelekileyo ukukhankanya igama eliphambili, uSemalt AutoSEO akanakuphendula yonke le mibuzo kuwe kodwa aphathe nomsebenzi nawo . Ungathi mhle kukukhathazeka malunga nokwenza uphando lwegama eliphambili kwiwebhusayithi yakho kwaye uxhomekeke ngokuzithemba kwi-Semalt ukuphatha umsebenzi kuwe.
Siye sathetha ngophando oluphambili ngegama elingaphezulu kunye nokusetyenziswa ngokufanelekileyo apha ngasentla, kodwa ukufumana amagama angundoqo ayisiyiyo kuphela injongo. Indlela oyisebenzisa ngayo la magama aphambili kunye nokubhala umxholo othetha nabaphulaphuli bakho iya kuba yinto ethathe isigqibo sokugcinwa komsebenzisi.
Uyifumana njani ingqalelo yomsebenzisi wakho, ukuhambisa ingxaki yabo kunye nesisombululo ngokungasebenziyo, kunye nokuhambelana nokulindelekileyo kwabo?
Ukubhala umxholo bubugcisa, kwaye ayinguye wonke umntu ongumbhali ozelweyo. Ngale nto ithethwayo, nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba awunakufunda ukwenza umxholo onempembelelo, ocacileyo, omfutshane, kunye nomxholo onolwazi.
Kuya kufuneka uqonde ukuba xa kuziwa kwi-SEO, "abantu beza kuqala," kwaye wakuqonda oko, kuya kuba lula ukubhala umxholo oya kwenza iindwendwe zakho zingenelwe kwaye ziqhubeke zibuyele.
Ukubhala umxholo kukwathetha ukuba awuxinzeleli abasebenzisi bakho ngophindaphindo lwamagama aphambili anokucaphukisa kwaye benze abasebenzisi bazive belahlekile. Ubhala ukusombulula ingxaki yabo, hayi ukwenza enye.
Umxholo awufanelanga ukuba nomtsalane kubaphulaphuli bakho ekujongwe kubo kodwa kufuneka babe namandla okusombulula ingxaki abazele yona. Ukuba ayizalisekisi enye yezo mfuno, inani labandwendwelayo abuzukunyuka.
Iqela lokubhala elingumxholo likaSemalt elinobuchule kubuchule babo kwaye linokunceda indawo yakho ukuba inyuke kunye nokugcina ukugcwala kwabantu abangenayo nokubuya.
4. UPhuculo lweWebhu
Ukuza kuthi ga ngoku, besikhankanya zonke iindlela izixhobo zeSemalt SEO ezinokunceda iwebhusayithi yakho ukuba ibekwe kwinqanaba, nangona kunjalo, ukuba awunayo enye okwangoku, ungakhathazeki. I-Semalt ayenzi kuphela iindawo ezikhoyo, kodwa ikhulisa imibono kunye nemibono kwiiwebhusayithi ezisebenzayo, ukusuka ekuqaleni.
Ngexesha ledijithali esiphila kulo, iwebhusayithi isebenza njengephothifoliyo, iphinde ibuye, kunye nendawo yokumisa yolu lwazi lonke oludingayo kulo naliphi na ishishini. Ukuqinisekisa ukuba iyasebenza, iyabukeka, iyafundisa, kwaye iyilwe kakuhle iyafana nokwenza umbono wokuqala ngexesha lokuthengisa.
I-Semalt ibonelela ngeqela elifanelekileyo labaphuhlisi bewebhu abakwaziyo i-ins kunye nokukhutshwa kweewebhusayithi. Ukusuka ekuphuhliseni ivenkile ze-E-commerce zokuphatha iinkqubo zolawulo lomxholo, iqela lethu liza kubonelela ngeenkonzo zophuhliso lwewebhu ze-SEO ezinceda ishishini lakho likhule.
Ngokudityaniswa ngokupheleleyo kwazo zonke izixhobo ze-SEO kunye nobuchule, iwebhusayithi yakho iya kubekwa ngaphezulu ngexesha.
5. Uhlalutyo lwewebhu
Okokugqibela, enye indlela ebalulekileyo uSemalt ekuncedeni ukubeka isikhundla kwiwebhusayithi yakho kukubonelela ngohlalutyo ngomlinganiso wegama eliphambili lesiseko seSemalt kunye noHlaziyo lweWebhu ukuze uhlale ngaphezulu kweendlela zakutshanje.
Isicazululi sibonisa ukuba iwebhusayithi yakho ibekwa kanjani kwiphepha lesiphumo seNjini yokuKhangela yeGoogle kwaye inike amagama aphambili anokukunceda ukukhuthaza ukujongwa kwe-SEO. Kuya kufuneka ubeke iliso kwindlela olwenza ngayo ukhuphiswano lwakho kwaye ufumanise into esebenzayo kubo.
Uhlalutyo lubaluleke kakhulu ekwenzeni izigqibo ezizayo ezinxulumene nentengiso kunye nemikhankaso ejolise kwi-SEO engazukutsala abathengi abatsha kuphela kodwa iphucule umgangatho. I-Semalt ikubonelela ngolwazi oluyimfuneko oya kuyidinga ukwenza izigqibo kunye neengcebiso zobungcali malunga nokuthatha amanyathelo alandelayo.
Iinkonzo zokuHlaziywa kweWebhu ngoSemalt ngumtshintsho womdlalo xa kuziwa kumkhankaso wakho we-SEO.
Ngubani onokuthi axhamle kwezi zixhobo ze-Semalt ze-SEO kunye nohlalutyo lweWebhu?
Ngoku, ukuba uyazibuza ukuba ngubani onokuthi axhamle kwezi zixhobo zeSemalt SEO kunye nohlalutyo lwewebhu, impendulo emfutshane yiyo nabani na wonke umntu onobukho online.
Impendulo ende, kwelinye icala, ngumnini shishini, usomashishini, iinkampani ze-niche, okanye ababoneleli beenkonzo ezithile abafuna ukuthengisa izakhono zabo kwi-Intanethi kwaye bafuna iphepha lokufika kwabaphulaphuli babo.
Nokuba ungumbhali kwezempilo kunye nendlela yokuphila, okanye umhleli wencwadi othanda amabali, okanye umntu onomdla kubuchwephesha onandipha ukuphonononga izinto ezintsha kakhulu kwimarike, izixhobo zeSemalt SEO zinganceda iwebhusayithi yakho ukuba ifikelele kubabukeli abaninzi kwihlabathi liphela.
Awufumani kuphela ulwazi oluhlengahlengisiweyo lwe-niche yakho, kodwa kunye nazo zonke ezinye izibonelelo kwindawo enye, obunokuthi ngenye indlela kuya kufuneka ujonge ngokukodwa.
Ke, nokuba ufuna ukwandisa ishishini lakho kwi-Intanethi okanye ufuna ukuthengisa uyilo lwe-quirky kwiwebhusayithi yakho, uSemalt uya kukuxhasa aze aqiniseke ukuba iwebhusayithi yakho yenziwe ngokufanelekileyo kwi-SEO, kwaye ishishini lakho liya kuchuma iminyaka emininzi liqhuba.
I-Semalt ngumnxibelelanisi we-SEO ojikelezwe zizinto zonke ozisa ishishini lakho kwi-Intanethi ngakumbi. Nokuba ufuna i-web optimization, uphuculo lwewebhu, analytics, okanye ufuna nje uncedo ekwenzeni umxholo ojolise ngokupheleleyo ngamagama aphambili, vele unxibelelane nathi.
Izixhobo kunye neenkonzo ezibonelelwe nguSemalt ziya kuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ibekwa kwinqanaba eliphezulu kuGoogle. Ngale ndlela, uya kuhlala ulinyathelo elinye phambi kokhuphiswano lwakho kwaye ufumane izithuthi ezininzi ukuze unyuse ingeniso.
I-Semalt ineephakheji ezahlukeneyo zohlobo ngalunye lomnini weshishini; Nokuba ufuna i-AutoSeo, i-FullSEO, ukuPhuhliswa kweWebhu okanye ukuHlaziywa kweWebhu, nxibelelana neqela lethu namhlanje ukufumana ukuba yintoni esebenzayo kuwe kunye neshishini lakho, ukuze sikwazi ukuqala uhambo lokufumana iwebhusayithi yakho emhlabeni kunye.
Uhlalutyo lubaluleke kakhulu ekwenzeni izigqibo zexesha elizayo ezinxulumene nentengiso kunye nemikhankaso ye-SEO ejonge kuyo engazukutsala abathengi abatsha kuphela kodwa iphucule nesikhundla ngokunjalo.